Maqaalka Sofia Wilton ee Martech Zone |
Maqaallada by Sofia Wilton
Sofia Wilton waa suxufiyad xirfadeed laakiin waxay qortaa sheekooyin gaagaaban waqtiga firaaqada. Sheekooyinkeeda waxaa lagu daabacay wargeysyada maxalliga ah waxaana si wanaagsan loogu aqoonsan yahay sheekooyinkeeda xiisaha leh. Waxay sidoo kale u qortaa baloogyo loogu talagalay Harada B2B la xiriira arrimaha taagan. Qoraa xamaasad badan, waxay waqtigeeda firaaqada oo dhan u hurtaa qorista. Waxay ku nooshahay New York laakiin waxay u safreysaa inta badan xirfadeeda darteed. Tani waxay iyada siinaysaa fursad ay ku sahamiso meelo cusub oo waliba ay ku darto waayo-aragnimadeeda sheekooyinkeeda oo siinaya dareen macquul ah.
Sabtida, Janaayo 16, 2021 Sabtida, Janaayo 16, 2021 Sofia Wilton
Waqtigan xaadirka ah iyo maanta, cudurdaar looma heli karo in aan la ogeyn cidda loo suuqgeynayo alaabadaada iyo adeegyadaada, iyo waxa ay macaamiishaadu doonayaan. Markii ay soo ifbaxday keydka macluumaadka suuq geynta iyo tikniyoolajiyadda kale ee xogta kexeysa, waa la dhaafay maalmihii suuq geynta aan la beegsan, la dooran, iyo guud ahaan Muuqaal Gaaban oo Taariikhi ah Kahor 1995, suuqgeynta inta badan waxaa lagu sameyn jiray boostada iyo xayeysiinta. Wixii ka dambeeyay 1995, markii uu soo ifbaxay teknolojiyadda emaylka, suuqgeynta ayaa waxyar ka sii gaar ah. Waa